अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको नाफा २१.६७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ? - Arthasansar
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको नाफा २१.६७ प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
विहीबार, ३० बैशाख २०७८, १० : ०८ मा प्रकाशित
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले ७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएकाे छ । उक्त नाफा रकम गत वर्षकाे सोही अवधिको तुलनामा २१.६७ प्रतिशतले धेरै हाे । गत आर्थिक वर्षकाे यसै अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेकाे थियो ।
तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त आम्दानी गत वर्षकाे यसै अवधिकाे तुलनामा २२.२९ प्रतिशतले थाेरै हाे । गत आर्थिक वर्षकाे यसै अवधिमा कम्पनीले विद्युत बिक्रीबाट ५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियाे ।
हालसम्म कम्पनीकाे अन्य श्रोतबाट हुने आम्दानी पनि ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६ करोड ८२ लाख रूपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै, कम्पनीकाे चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ, जगेडा कोषमा ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०९ रुपैयाँ ३२ पैसा र प्रतिसेयर आम्दानी ९ रुपैयाँ ०७ पैसा रहेकाे छ ।